Oghere na oyi akwa ozone: ihe kpatara ya na nsonaazụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Oghere na ozone oyi akwa
Ngwurugwu ozone bụ mpaghara ọgwụgwọ ga-abụ ebe ntụpọ ozone dị elu karịa nkịtị. Akwa a na-echebe anyị pụọ na radieshon na-emerụ ahụ nke sitere na anyanwụ. Otú ọ dị, emission nke ụfọdụ chemical bekee mara aha chlorofluorocarbons a emeela a oghere na ozone oyi akwa. A maara oghere a ruo ọtụtụ iri afọ ma na-ebelata ekele maka usoro Montreal.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oghere dị na ozone oyi akwa.
1 Nkọwa nke oyi akwa ozone
2 Oghere na ozone oyi akwa
3 Nsonaazụ oghere dị na oyi akwa ozone
3.1 Nsonaazụ maka ahụike mmadụ
3.2 Ihe si na anụ ala na nke mmiri
3.3 Ihe si na osisi
Nkọwa nke oyi akwa ozone
Ka anyị buru ụzọ mara ihe ozone oyi akwa bụ. Ọ bụ ụdị akwa nchekwa dị na stratosphere. Ihe mkpuchi a mere ihe nzacha maka radieshon nke ikuku nke na-emerụ ndi mmadu di ndu. Ọ naghị arụ ọrụ dị ka ọta megide ikuku radiation ultraviolet a n'ụzọ na-eme ka ndụ dị n'ụwa dị ka anyị si mara ya taa.
N’agbanyeghi n’ezie na oyi akwa a di oke nkpa maka ndu, odi ka ndi mmadu ka kpebisiri ike ibibi ya. Chlorofluorocarbons Ha bụ kemịkal sitere na mmeghachi omume dị iche iche na-ebibi ozone dị na stratosphere. Ọ bụ gas ndị mejupụtara fluorine, chlorine na carbon. Mgbe kemịkal a rutere na stratosphere, ọ na-emeghachi omume nke foto na ultraviolet radieshon nke anyanwụ. Nke a na - eme ka molekul mebie ma ha chọrọ atọm chlorine. Chlorine na-emeghachi omume na ozone na stratosphere, na-eme ka atọm oxygen meju ma na-agbaji ozone. N'ụzọ dị otú a, nsị nke mmiri ọgwụ ndị a na-aga n'ihu na-ebibi mbibi ozone.
Ọzọkwa, a ghaghị iburu n'uche na kemịkal ndị a nwere ogologo ndụ bara uru na mbara igwe. N'ihi usoro iwu Montreal, amachibidoro nsị nke kemịkal ndị a kpamkpam. Otú ọ dị, ruo taa, ozone oyi akwa ka mebiri emebi. Oghere dị na oyi akwa ozone na-achọpụta nke ọma na iri afọ ndị gara aga. Ka anyị lebakwuo anya na nke a.
Ozone dị na stratosphere n'ogologo n'etiti kilomita 15 na 30. Ihe mejupụtara oyi a bụ ụmụ irighiri ozone nke, n’aka nke ya, mejupụtara atọm atọm atọm atọm. Ọrụ nke oyi akwa a bụ ịmịkọrọ radiesị ultraviolet B, na-eje ozi dị ka nyo iji belata mmebi.
Mbibi nke oyi akwa ozone na-eme mgbe enwere mmeghachi omume kemịkal nke na-akpata mbibi nke ozone a. A na-ehichapụ radieshon nke anyanwụ ahụ na oyi akwa ozone na ọ bụ ebe mkpụrụ ndụ ozone na-agbasa site na radiation ultraviolet B. Mgbe nke a mere, mkpụrụ ndụ ozone na-ekewa n'ime oxygen na dioxide. A na-akpọ usoro a fotolysis. Ọ pụtara ntiwa nke molekul site na ihe nke ìhè.
Thedị dioxide na oxygen adịghị agbasasị kpamkpam, mana jikọtara ọzọ, na-akpụ ozone ọzọ. Nzọụkwụ a anaghị eme mgbe niile ma ọ bụ ya na - akpata oghere na ozone oyi akwa. Isi na-akpata ndị na-ebibi ozone oyi akwa na ogo ọsọ bụ n'ihi nsị nke chlorofluorocarbons. Ọ bụ ezie na anyị kwuburu na ihe ahụ merenụ sitere na anyanwụ na-ebibi ozone, ọ na-eme ya n'ụzọ ga-eme ka nguzozi ahụ ghara ịnọpụ iche. Nke ahụ bụ, ole ozone nke foto gbajiri agbaji hà ma ọ bụ obere karịa ozone nke enwere ike ịmalite site na mkpakọrịta dị n'etiti ụmụ irighiri ihe.
Nke a pụtara na isi ihe na-akpata ndakpọ nke oyi akwa ozone bụ nsị nke chlorofluorocarbons. Organizationtù Na-ahụ Maka Ihu Igwe Worldwa kwenyere na mgbake nke oyi akwa ozone ga-eme gburugburu afọ 2050 n'ihi mmachibido ngwaahịa ndị a. Buru n'uche na ihe ndị a niile bụ atụmatụ ebe ọ bụ na, ọbụlagodi na a kwụsịrị kemịkal ndị a, ha na-anọ na ikuku ruo ọtụtụ iri afọ.
Nsonaazụ oghere dị na oyi akwa ozone
Karịsịa, oghere ozone dịkarịsịrị Antarctica. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ gas ndị na-emebi ozone oyi ebuputela na mba ndị mepere emepe, enwere ikuku ikuku nke na-eburu gas ndị a na Antarctica. Ọzọkwa, na nke a anyị aghaghi ịgbakwunye oge gas ndị a dị na mbara igwe ma na ha nwere ike imebi ozone.
N'ihi mgbasa zuru ụwa ọnụ, gas ndị a eritela uru site na obere okpomọkụ dị n'akụkụ ndịda ma mebie mkpokọta nke ozone a. Ma ọ bụ na mbibi nke kwuru oyi akwa ma ọ bụrụ na ọ accentuated ala na okpomọkụ. Nke a na - eme ka mbelata ozone na - abawanye n'oge oyi mgbe ọ na - agbake na mmiri.
Enwere nsogbu dị iche iche nke mmebi ma ọ bụ mbibi nke oyi akwa ozone. Anyị ga-enyocha ihe ha dabere na onye ha metụtara.
Nsonaazụ maka ahụike mmadụ
Skin kansa: Ọ bụ otu n'ime ọrịa ndị a kacha mara amara metụtara ikpughe na radieshon ultraviolet B. Ọ dị mkpa ka sunbathe na nchedo ebe ọ bụ na ọrịa anaghị apụta n'oge a, mana afọ.
Dịghịzi usoro n'anya: Ime ihe banyere nje na-eji nwayọọ nwayọọ belata ikike ichebe onwe anyị megide ọrịa na-efe efe.
Ọgba aghara ọhụụ: o nwere ike ibute cataracts na presbyopia ọtụtụ mgbe.
Nsogbu iku ume: Nsogbu ụfọdụ bụ ụkwara ume ọkụ n'ihi mmụba nke ozone na oyi akwa nke ikuku.
Ihe si na anụ ala na nke mmiri
Ọ na-emetụta anụ ọhịa niile ma na-emetụta ụmụ mmadụ. Banyere anụmanụ ndị na-agba mmiri, radieshon a rutere elu ala n'ụzọ na-emetụta phytoplankton kpọmkwem n'oké osimiri. Nke a phytoplankton nwere ọnụ ọgụgụ ha belata ruo n'ókè nke na ọ na-emetụta ihe oriri.
Ihe si na osisi
Mmetụta nke radieshon ultraviolet a kachasị emerụ ahụ na-emetụta mmepe nke ụdị ahịhịa, na-eme ka okooko osisi na oge uto ha dịrị iche. Ihe a niile na-emetụta Mbelata ihe ọkụkụ na ihe ọkụkụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oghere dị na oyi akwa ozone.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oghere na ozone oyi akwa